HORDHAC: Brighton v Liverpool – Gool FM
( Premier League ) 12 Jan 2019. Liverpool ayaa u safartay Brighton kulamada 22-aad ee Premier League Todobaadkan.
Hogaamiyaasha horyaalka ayaa damacsan iney kordhiyaan dhibcaha hogaanka kaddib qasaaradii ugu horreysay oo soo gaartay kulankii u dambeeyay horyaalka oo ay City la cayaaryeen.
Waqtiga: 06:00 pm ( SGA)
Brighton ayaa markale weyneysa daafaca Bernardo, kasoo dhaawac muruqa ah soo gaaray kulankii West Ham ee 2 bishan January.
Alireza Jahanbakhsh, Jose Izquierdo iyo Mat Ryan ayaa sido kale heli Karin.
Virgil van Dijk ayaa kusoo laaban doona Liverpool kaddib markii uu seegay kulankii Isniinta ay guuldarrada kala kulmeen Wolves koobka FA Cup, laakiin Reds waxaa heysta daafac yari dheeshan.
Dejan Lovren ayaa ku maqan dhaawac muruqa ah iyo Joe Gomez oo weli diyaar aheyn, sidaa darteed Fabinho ayaa laga yabaa inuu markale cayaaro daafaca dhexe.
Joel Matip ayaa kusoo laabtay tababarka kaddib markii uu ka jabay kalxanta waana la qiimeyn doonaa xaalkiisa, iyadoo ninka qadka dhexe Jordan Henderson, uu ahaa mid laga daaweynayay dhibaato kubka ah.
Cayaariyahanada ugu muhiimsan kooxda martida ayaa la nasiyay kulankii Wolves iyadoona dib loogu yeeri doona dheeshan.
Brighton ayaa qasaartay lixdoodii kulan ee u dambeeyay oo ay Liverpool la cayaareen dhammaan tartamada.
Reds ayaa adkaatay dhammaan seddax kulan oo Premier League la kulantay Brighton, iyagoo dhaliyay 10-gool waxaana laga dhaliyay gool kaliya.
Liverpool ayaa marnaba guuldarro kala kulmin Brighton cayaaraha sare ee horyaalka, laba guul iyo seddax barbaro. Shantaa kulan waxaa kasoo baxay guud ahaan 25-gool – 16-gool waxaa dhalisay kooxda Merseysiders iyo 9-gool oo ay dhalisay Seagulls.
Brighton ayaa qasaartay lix kulan oo kamida 29-cayaar oo ay Premier League ku dheeshay garoonkooda, laakiin shan kamida kulamadaas waxay guuldarrada kasoo gaartay kooxaha lixa sare ee horyaalka.
Tani waxay noqon doontaa markii u horreysay oo ay Brighton kula cayaarto garoonkooda hogaamiyaasha Premier League.
Liverpool ayaa laga yabaa iney soo gaarto guuldarradii seddaxaad oo xariira dhammaan tartamada markii u horreysay tan iyo bishii January 2017.
Waqtigii u dambeeyay oo ay guuldarreysteen kulamo isku xiga horyaalka waxay aheyd August iyo September 2015, xilligaa uu kooxda maamulayay Brendan Rodgers.
HORDHAC: Chelsea v Newcastle